ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်ဖို့ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်ဖို့
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း လူငယ်တော်တော်များများမှာ နေ့နှင့်ညမှားနေကြတာ များပါတယ်။ ညဘက်ကို တော်ရုံနှင့် မအိပ်ပျော်ကြတဲ့အတွက် အိပ်ရေးပျက်စေတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားကိုလည်း နည်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ကိုဗစ်ကာလမှာ လူတွေ ဘာကြောင့် အိပ်မပျော်ကြလဲ?
မိမိနှင့်တကွ မိသားစုဝင်တွေကို ရောဂါကူးစက်မှာ ပူပန်ခြင်း၊ စီးပွားရေးကျပ်တည်းခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့အတွက် ညဘက် အိပ်မပျော်ကြတာ များပါတယ်။
(၂) နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပျက်ယွင်းခြင်း
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အိမ်မှာသာနေကြရတာမို့ ပင်ပင်ပန်းပန်း သွားလာရခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ညဘက်မှာ တော်ရုံနှင့် မအိပ်ပျော်ကြပါဘူး။
(၃) အလင်းရောင်နှင့် ထိတွေ့ချိန်နည်းခြင်း
ကျွန်မတို့ဟာ အိမ်ထဲမှာသာနေရခြင်းကြောင့် အရင်ကလောက် နေရောင်နှင့် ထိတွေ့ချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ နေရောင်ကပေးသော အလင်းဟာ ကျွန်မတို့ကိုယ်ထဲရှိဆဲလ်များအား ဘယ်ချိန်မှာနိုးထရမယ် ဘယ်ချိန်မှာ အိပ်စက်ရမယ်ဆိုတာ ခွဲခြားသိစေပါတယ်။ အခုလို အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းသွားခြင်းကြောင့် ညဘက်လည်း အိပ်စက်ဖို့ သိပ်မလွယ်ကူတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ဘာလို့ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ဖို့ အရေးကြီးတာလဲ?
● အိပ်ရေးဝခြင်းဟာ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
● အိပ်စက်ချိန်နည်းပါက စွမ်းအင်နည်းပါးစေပြီး စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်းတို့ကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
● တွေးခေါ်ခြင်း၊ စာပေလေ့လာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာ အိပ်ရေးဝနေသူတစ်ယောက်ဟာ ပိုပြီးကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
>> အိပ်ရေးဝစေဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ?
● တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၇ နာရီခန့် အိပ်စက်ချိန်ရှိပါစေ။
● ညအိပ်ခါနီးမှာ ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ နူးညံ့သောသီချင်းများ နားထောင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
● အိပ်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ခန်းဟာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ပြီး အလင်းရောင်မှိန်ပျပျသာ ရှိသင့်ပါတယ်။
● မအိပ်ခင် မိနစ် ၃၀ အလိုမှာကတည်းက ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။
● အိပ်ခါနီး အစာများစားခြင်း၊ ကော်ဖီနှင့် အရက်ဘီယာသောက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ညအိပ်မပျော်သူတွေလည်း အထက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကို လိုက်နာပြီး အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြနော်။